Raketo memo feo ary ankafizo ny manoratra amin'ny Auditory | Avy amin'ny mac aho
Raha ny mipetraka eo alohan'ny solosaina no manoratra, arakaraka ny karazan-drakitra hataonay, ny traikefa tsara indrindra dia atolotry ny rindranasa izay manafoana ireo fanelingelenana be loatra avy amin'ny fomba fijery, ka andao hifantoka amin'ilay taratasy banga izay tsy maintsy nofenointsika teny.
Ao amin'ny Mac App Store dia afaka mahita fampiharana isan-karazany amin'ity karazana ity isika. Amin'izy rehetra dia tsy maintsy manasongadina ny Auditory izahay, fampiharana iray izay misy endrika kanto sy maoderina. Ary koa, misaotra an'i mamela antsika handraisam-peo, no fampiharana mety indrindra rehefa tsy tianao ny hipetraka sy hikapoka eo amin'ny fitendry.
Auditory dia manolotra antsika ny fitaovana ilaina rehetra hahafahana mamolavola ireo lahatsoratra soratantsika, mba hahafahanay manasongadina ireo ampahany lehibe indrindra amin'ny antontan-taratasy. Ny safidy rehetra amin'ny famolavolana ny antontan-taratasy dia azo alefa amin'ny alàlan'ny totozy na amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana fitendry, mba hahafahana manao haingana ny fampiroboroboana ny lahatsoratra ary tsy misy fanelingelenana. Raha zatra nanoratra tamin'ny endritsoratra iray isika, amin'ny Auditory dia tsy hanana olana amin'izany izahay, satria manome loharanom-pahalalana marobe ho antsika izy io, ho fanampin'ny zavatra azontsika an-tanindrazana amin'ny macOS.
Ny safidy ahafahantsika mirakitra dia mety indrindra rehefa tsy ao anaty fivoriana izay tadiavintsika raketina isika, na amin'ny endrika audio na an-tsoratra, izay azontsika soratana mandritra ny fanaovana ny fandraisam-peo. Ny audio noraketinay dia hifandraika amin'ny antontan-taratasy soratantsika mba tsy hahavery antsika amin'ireo rakipeo rehetra ary tsy fantatray izay antontan-taratasy miresaka azy.
Ny auditory dia ahafahantsika mamorona lahatahiry samihafa ahafahantsika mitahiry ireo antontan-taratasy sy rakipeo rehetra vitantsika mba hahafahana miditra haingana nefa tsy mila mikaroka, fikarohana izay azontsika ampiasaina ihany koa. Auditory dia manana vidiny mahazatra ao amin'ny Mac App Store 5,49 euro, fa mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana amin'ny alàlan'ity rohy manaraka ity.
Auditory - lahateny Rec & naoty€ 4,99
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Raketo memo feo ary ankafizo ny manoratra amin'ny Auditory
HyperDrive, USB-C Hub misy seranan-tsambo 8 ary famahanana tsy misy tariby ho an'ny iPhone X